OS X 10.11 တွင်လက်သုံးချောင်းဖြင့်ဆွဲခြင်းအမူအယာကိုဖွင့်ပါ ငါက Mac ကပါ
OS X El Capitan တွင်လက်သုံးချောင်းဖြင့်ဆွဲခြင်းအမူအယာကိုဖွင့်ပါ
Mac အသုံးပြုသူများအတွက်လက်သုံးချောင်းသုံးချောင်းဆွဲခြင်းအမူအယာကိုမရရှိနိုင်ပါ System Preferences တွင် "မြင်နိုင်သော" ရွေးစရာ OS X အယ်လ် Capitan အတွင်း။ ၎င်းသည်၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရှိသည့်စနစ်မဟုတ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် System Preferences> Trackpad ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားနေရာတစ်ခုတွင်နေရာချထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အစပိုင်းတွင်ထင်ရသလောက်မဆိုးပါ။
Apple ကလက်သုံးချောင်းဖြင့်အမူအရာဖြင့်ဆွဲယူခြင်းကိုအခြားနေရာတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည် နေရာ option ကိုပြောင်းလဲပစ် အများကြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ မင်းအခုဘယ်မှာနေလဲကြည့်ရအောင်။
ဒီအမူအယာကိုဖွင့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် System Preferences သို့ပြန်သွားရလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဤတစ်ကြိမ်တွင် Accessibility option သို့သွားပြီး၊ « Mouse and Trackpad »ကိုနှိပ်ပါ Interaction menu အတွင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ Trackpad Options ရှိ။ ဆွဲချခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ activate လုပ်ပြီးဆွဲယူရန်လက်ချောင်းသုံးချောင်းအသုံးပြုရန်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။
သငျသညျမွငျနိုငျသောကွောငျ့ပိုပြီးလျှို့ဝှက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ငါဒီ option ကို Trackpad ၏ default အ menu မှာဖယ်ရှားပစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှာမတွေ့နိုင်ပါ, အနည်းဆုံးအားလုံး activate လုပ်နိုင်သည်နှင့်ပင်ဒီဆွဲဆွဲ၏ဤလမ်းကိုအသုံးပြု။ ဆက်လက်အသုံးဝင်နိုင် ထပ်တူပြုခြင်းအပြင်၊ ၀ င်းဒိုးများကိုလည်းဆွဲယူပါ ကျွန်တော်တို့ကိုစာသားရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်, စနစ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန် trackpad သုံးသူသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော option တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » OS X El Capitan တွင်လက်သုံးချောင်းဖြင့်ဆွဲခြင်းအမူအယာကိုဖွင့်ပါ
အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာကျွန်ုပ်သည် OS X 10.10.5 တွင်ရှိသည်။ ဤမူကွဲသည်ယခင်ကမဟုတ်ခဲ့သော v option ဖြစ်သောကြောင့် v ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီ option မရှိရင်သေတော့မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။
လက်ချောင်း ၃ ချောင်းအမူအရာများသည်Exposé, Launchpad နှင့် Mission Control တို့အတွက်သူတို့ထည့်သွင်းထားသောအသစ်များနှင့်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းကိုပြသသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အခြားနေရာများတွင်ထားရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဒီအပလီကေးရှင်း (၃) ခုဟာအဓိပ္ပာယ်သိပ်မတွေ့ဘူးထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လက်ချောင်း ၃ ချောင်းနဲ့ဆွဲယူခြင်းသည်အတော်လေးလက်တွေ့ကျပုံရသည်။
အက်ဝါဒိုပီရက်ဇ် (@OrlandoTrier) ဟုသူကပြောသည်
ဒါဟာနှစ်နာရီကြာတယ်၊ ငါကခြစ်ရာကနေမွမ်းမံတာမမှားတာလို့ထင်တယ်၊ ငါဒီလိုလုပ်ဖို့အချိန်ဖြုန်းနေတယ်။ သူကပြောတယ်၊ အင်တာနက်ပေါ်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာဂုဏ်ယူပါတယ်။ သငျသညျတခါငါ့အသက်ကိုကယ်တင်ပြီ။ လက်မ **
Eduardo Pérez (@OrlandoTrier) ကိုတုံ့ပြန်
P.S. အခုထွက်မလာသေးတဲ့အချက်ကတော့ application တစ်ခုကိုလက်သုံးချောင်းဖြင့်မျက်နှာပြင်အပြည့်ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ငါ dashboard ရွေးစရာကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအဲဒါကိုသုံးပေမယ့်ကောင်းတဲ့ function ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး မဆိုထောက်ခံချက်?
Omar garcia ဟုသူကပြောသည်
Omar Garcia သို့စာပြန်ပါ
Gilbert Castillo ဟုသူကပြောသည်
gilberto castillo အားပြန်ကြားပါ
Zen အထောက်အပံ့ ဟုသူကပြောသည်
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသုံး ၀ င်သောလုပ်ဆောင်မှုသည်လျှို့ဝှက်ထားသည်ကိုနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စတိဗ်ဂျော့ဘ်စ်မပါပါက Apple ရှိအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမည်သူမျှဂရုမစိုက်ပါ။
မင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့အကူအညီ Miguel အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂျေ Molina (@ ilook3) ဟုသူကပြောသည်
J. Molina (@ ilook3) သို့ပြန်သွားရန်
ကားလို့စ် Santana ဟုသူကပြောသည်
El Capitan စနစ်သစ်ကိုအလွန်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း၊ ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိပါသည်။ ထို့အပြင်အက်ပဲလ်သည်သုံးစွဲသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဘယ်ကြောင့်ယူသွားသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ Mac နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းကြောင့်လာမည့် operating system အတွက်သူတို့သည် function အသစ်များနှင့် command shortcuts အသစ်များကိုဆောင်ကြဉ်းမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်
Carlos Santana အားပြန်ပြောပါ
ထည့်ဝင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင်ဤအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတဲ့အခါ၊ အခြားနှုတ်ဆက်စကားများ၊ နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းများကိုမလုပ်လိုတော့ပါ။
တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ option ကိုမပါဘဲမသက်မသာဖြစ်ခဲ့သည်။
Ana မာရီယာ Quezada Geldres ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ macbookpro ကို el capitan သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး trackpad တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလစ်သည်သာကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ = ((
Ana Maria Quezada Geldres အားပြန်ပြောပါ
Zulema Cardona D'Pereira ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! ငါ option ကိုမပါဘဲဘာလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါ
Zulema Cardona D'Pereira အားပြန်ပြောပါ
Maribel လင်း ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ soponcio ပေးပြီးသား ...
Maribel Falcon အားပြန်ပြောပါ
Jorge Aranda ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jorge Aranda အားပြန်ပြောပါ
မင်းရဲ့အလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ယနေ့ပန်းသီးစောင့်ရှောက်ရေးကိုယနေ့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကစက်ပစ္စည်းလို့ပြောကြတယ်။ ငါ subscribe နှင့်မျှဝေပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!! 😉
Jorge Mosquera ဟုသူကပြောသည်
jorge mosquera သို့ပြန်သွားပါ
DJ သမား Freije ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Sierra နဲ့အတူတူပဲ။ ဒါဟာငါ့ကိုလက်ညှိုး3ဆွဲခြင်းမရှိဘဲငါ့ကိုအရူးမောင်း!
DJ Freije အားပြန်ပြောပါ
အကူအညီအတွက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ အဆင့်များအကြောင်းရိုးရှင်းစွာဖော်ပြရန်နှင့်လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုရှင်းလင်းချက်မရှိပဲအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စာမျက်နှာကောင်း။
AppleCare + သည်မူလစွမ်းရည်၏ ၈၀% မပြည့်မီသောဘက်ထရီများအစားထိုးမှုကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်
Samsung နဲ့ Apple တို့၊